Archive du 20200715
Antananarivo sy Antsirabe 2 indray no matin’ny Covid-19
Niampy 2 ny namoy ny ainy vokatry ny coronavirus, nampiakatra ho 39 ireo namoy ny hatramin’izay. Raiamandreny am-panahy dia ny Filohan’ny Fiangonana FLM teo aloha ny iray,
Imerintsiatosika Ho vita atsy ho atsy ilay fonja manarapenitra
Sambany no hisy fonja manara-penitra natokana ho an’ireo gadra tsy maty manota eto amintsika. Ao Imerintsiatosika no hanorenana izany foto-drafitrasa izany amina velanaran-tany 4800 m².
BAR nisokatra teny Itaosy Olona 17 nosamborina teo am-pirevena
Bar iray mody nikatona no tra-tehaky ny polisim-pirenena teny Itaosy omaly. Rehefa nandalo nanao fisafoana mantsy ireto farany dia nahare olona nitabataba tao anatin’ilay toerana ka niroso tamin’ny fisavana avy hatrany.
Sambava Lasa fanaovana alim-pandihizana ilay EPP
Toy ny faritra maro dia miato ihany koa ny fampianarana any amin’ireo sekolim-panjakana any amin’ny distrikan’i Sambava. Voakasik’izany ny EPP ao Ambodivohitra izay navadiky ny sasany ho lasa toerana fandraisana alim-pandihizana mba hahazoana vola.
Fanararaotam-pahefana Manome vahana ireo mpanao trafika lavanila ilay ragôva
Nampiteny ny moana ary mampiraviravy tanana ireo mpiara-miasa ambany fahefany ny fanararaotam-pahefana ataon’ilay ragôva iray, amin’ny baiko sy tsindry manome vahana ireo mpanao trafika lavanila.
Famatsiana rano fisotro madio Neken’ny HCC ny fanatanterahana ny Jirama Water III
Neken’ny eo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana na HCC ny fanatanterahana ny tetikasa famatsiana rano fisotro madio eto Madagasikara
Mpivarotra kojakoja ankoatra ny sakafo Nanaovan’ny miaramila bemidina ny teny Itaosy
Anisan’ny tanàna ho voasokajy maro olona mafy loha ny eny Itaosy sy ny manodidina na dia efa tsy mitsaha-mitombo aza ny isan’ireo olona mamoy ny ainy vokatry ny fiparitahan’ny Covid 19.
Mpivarotra tsy manara-dalàna Alefa eny fitsarana izay mbola tratra mamerin-keloka
Roa isan’andro raha kely ireo mpivarotra tsy manara-dalana tratry ny mpitandro ny filaminana eny amin’iny distrikan’Antananarivo Atsimondrano iny, raha araka ny fanadihadiana natao.
Tosika fameno eto Antananarivo 45 000 no hisitraka, tsy ao anatiny ireo efa nahazo
45 000 eo ny fianankaviana hahazo ny fanampiana tosika fameno, izay hanomboka anio ny fisitrahana izany, raha ny fanazavan’ny Governoran’ny Faritra Analamanga Atoa Hery Rasoamaromaka.
Tsy fanjarian-tsakafo any atsimo Mety mbola hiampy 10% mihoatra ny vinavina
Araka ny maridrefy momba ny tsy fanjarian-tsakafo na IPC dia mety ho tafakatra 527.000 any ny isan’ireo ho tratran’ny krizin-tsakafo any amin’ny faritra atsimon’ny nosy na ilay antsoina hoe “IPC Phase 3”.
Andrakata- Andapa Novonoina avy eo nariana tao anaty rano…
Habibiana tsy roa aman-tany no nihatra tamin’ny lehilahy iray, 24 taona, ka naningotra ny ainy tao Andrakata Distrika Andapa.
Ihosy Nandray fepetra ny faritra
Manoloana ny trangana covid-19 voamarina tamin'ity fiandohan'ity herinandro ity tany Ihosy dia nandray fepetra manokana ho fiarovana
Ambatondrazaka Nitombo izay tsy izy ireo voan’ ny Covid-19
Miha miakatra ny tarehimarika ho an’ireo voan’ny Covid 19 any amin’ny distrikan ' Ambatondrazaka ankehitriny.
Covid19 ao Nosy Be Naato ny fampianarana, mihatra ny « couvre-feu »
Mihamitobo ny isan’ny olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina Covid19 ao Nosy Be Faritra DIANA, taorian’ny fitiliana natao azy ireo.
Antsirabe Tonga any anaty orinasa afaka haba ny Covid-19
Misedra olana hatrany ireo mpiasa amina orinasa afaka haba ao Antsirabe. Teo ny fampiatoana mpiasa aman-jatony vao tsy ela izay,
Jean Marc Koumba « Efa sitrana aho »
Ny 3 jolay lasa teo no nanao fitiliana coronavirus i Jean Marc Koumba, ilay lehilahy ranjanana mpiambina ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana taloha, ary lasa mpiambina an’Atoa Naina Andriantsitohaina ben’ny tanànan’Antananarivo taorian’ny fakana an-keriny nahazo ny zanak’ity farany ny desambra 2017.
Masoivoho Frantsay “Mbola ho mafy ny ady ao anatin` ny herinandro maro”
Voarara ny hetsika famoriana olona araka ireo fepetra ara-pahasalamana, ka tamin` ny alalan` ny tranonkalan` ny masoivoho Frantsay sy ny tambajotra serasera no nanarahana ireo kabary samihafa ny fetim-pirenena fratsay omaly 14 jolay.
Depiote Tsabotokay Honoré « Tena nanasitrana ahy ny CVO »
Nanambara ny fahasitranany tamin’ny aretina Covid19 tao amin’ny pejiny facebook i Tsabotokay Honoré, solombavam-bahoaka IRD voafidy tao Vohipeno, Faritra Vatovavy Fitovinany.
Ambohidahy-Ankadindramamy Faritra mena amin’ny Coronavirus
Voasokajy ho toerana be olona mitondra ny coronavirus eto Antananarivo Renivohitra ny Boriborintany faha-5.
Andapa Olona iray tratry ny Coronavirus
Renim-pianakaviana iray no fantatra fa lasibatry ny tsimok’aretina Covid 19 any amin’ny distrikan’Andapa.